Azụmaahịa Sparkle Na-amalite Iji Kwado SMEs Na Nigeria
Azụmaahịa Sparkle na-akwado SMEs na Nigeria
GirlEng Technovation Camp 2021 meghere umuaka umuaka Afrika
ImaliPay na-ebuga Teknụzụ iji melite Ahụike Ego nke Ndị Ọrụ Africa Gig
Ego nke nwoke na nwanyị itinye ego: Igodo nke Nbanye na Ntinye Azụmaahịa
Enwe akara ala? Debanye aha maka Ọzụzụ Nkwalite Ahịa nke Ghana Tech Lab
MSME Dialogue 3.0: Ndị ọkachamara na-enye nghọta na Teknụzụ & Mgbanwe Dijitalụ
Sparkle, ihe eji eme ihe banyere ihe omimi nke mbu nke na-enye ndi Naijiria ego ego, ndu ndu ya na ndi mmadu na-akwado ahia n’uwa nile. Azụmaahịa Azụmaahịa.
Nke a bụ ọrụ ọhụrụ na ngwa ngwa Sparkle dị ugbu a, iji nyere obere azụmaahịa na SME ohere ịnweta ngwaahịa na ọrụ ndị dị mkpa iji bulie ụlọ ọrụ ha na ntanetị.
Atụmatụ azụmaahịa azụmaahịa gụnyere:
Ndepụta Ngwaahịa na Akwụkwọ ọnụahịa: Iji nyere ndị azụmaahịa aka ijikwa arịrịọ ịkwụ ụgwọ ha yana arụmọrụ ha niile
Ọrụ mentkwụ Gategwọ Ọrụ: Iji jikwaa ịkwụ ụgwọ otu na nnukwu karịa karịa
Ndụmọdụ /tụ / Ngụkọta oge: Iji nyere aka nyochaa ntụgharị azụmahịa na gbakọọ ụtụ isi
Nkwụ ụgwọ ọnwa / njikwa ndị ọrụ: Iji jikwaa ịkwụ ụgwọ ndị ọrụ na elele nke ọma na enweghị mmejọ ma ọ bụ mmemme mmadụ, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Emebela ikpo okwu ya na mbido nke mbụ, ndị ọchụnta ego dijitalụ na ụlọ ọrụ n'uche, ndị kwesịrị ịgba ọsọ n'akụkụ niile nke ụlọ ọrụ ha, na aka nke bọtịnụ.
Na-agụkwa, Ezigbo ndị mmekọ Visa iji mee ka ndị na-azụ ahịa na SME dị ike nke Nigeria
Kemgbe mmalite ya na 2020, Sparkle toro obodo nke ewukwasịrị ntụkwasị obi na nghọta, na-enyere ọtụtụ puku aka inweta ụzọ ọhụrụ, dị mfe, enweghị nchekasị iji hazie ego ha.
Na Nigeria, SMEs na-enye 48% nke GDP mba, na-aza maka 96% nke azụmaahịa na 84% nke ọrụ, agbanyeghị ha na-echekarị ihe ịma aka ihu na ịme mkpebi dị iche iche n'ihi enweghị data maka isi ihe ọmụma banyere nsogbu ndị dị mkpa metụtara ahịa ha.
Ndi otu egwuregwu Sparkle wuru iji kwado nde SME nke Naijiria ka ha n’iru, Azụmaahịa Sparkle ga-eweta azụmahịa azụmahịa niile dị mkpa n’elu otu nchekwa ma dịkwa mfe iji rụọ ọrụ.
N'ikwu okwu banyere mwepụta ahụ, Uzoma Dozie, onye guzobere na onye isi ụlọ ọrụ Sparkle kwuru, “SMEs bụ ndị na-ewe ndị ọrụ n’ọrụ kacha ukwuu na Nigeria mana ha enweghị ohere ịnweta ọrụ ndị bụ isi ga-enyere azụmahịa ha aka.
Anyị ewebatala Azụmaahịa Sparkle dị ka ụlọ ahịa nkwụsịtụ, iji nyere ndị mmadụ aka ịmalite azụmaahịa ha site na ịgbakọ, ka ha na-ezute isi ihe mgbu SMEs dị, ma na-enye ha ohere ịtụkwasị n'ọkwa nke ọzọ.
E nyela anyị ohere a n'ihi nyocha anyị na ohere anyị nwere na data, nke na-enye anyị ohere ịmata ihe ndị SME na-achọ.
Anyị nwere obi ụtọ n'ezie maka nsonaazụ mbụ sitere na nnwale beta ma na-ele anya na nsonaazụ na-emetụta maka obere azụmaahịa n'ọdịnihu dị nso.
Azụmaahịa Sparkle na-ebi ugbu a, ndị ọrụ Sparkle dị ugbu a ndị debanyere aha azụmahịa na Nigeria nwere ike ịnweta ya.
Na-agụkwa, Karịa Digital Ecosystem, Sparkle na-eche banyere Ndụ gị
Iji debanye aha, ndị mmadụ n'otu n'otu ga-enwe akaụntụ Sparkle nke aka ha, Nọmba Nchọpụta Taxtụ [TIN], na adreesị ozi-e jikọrọ na TIN ha.
Uzoma, ebe ọ rụworo ọrụ na ụlọ akụ na-ere ahịa ihe karịrị afọ 20, nwere ahụmịhe na-enweghị atụ mgbe a bịara n'ịrụ ngwaahịa ngwaahịa ụlọ akụ maka azụmaahịa.
Ọ na-agbakwụnye, “E wuru Sparkle iji nye ndị mmadụ ohere inwere onwe ha; Azụmaahịa Sparkle bụ mgbakwunye nke a, nke mere na ndị nwe azụmaahịa nwere ike belata esemokwu mgbe ọ bịara azụmaahịa nhazi dị mkpa.
anyị nwere obi ụtọ ịpịpụta ngwaahịa na ọrụ ọhụrụ anyị, ma na-aga n'ihu na-eto eto na ndị ọrụ azụmaahịa na-arịwanye elu nke ndị nwe ụlọ ahịa na-achọghị ịnabata na ụlọ akụ na ụlọ akụ na ụzọ ụkwụ bụ naanị ụzọ isi na-eduzi azụmahịa na Nigeria ”.